English Philology ဆိုတာ ဘာလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 03/06/2022 23:51 | အဆင့်မြှင့်တင် 03/06/2022 23:54 | ဂရေဒါ
သင်ကြားရေးနယ်ပယ်တွင် ကွဲပြားသော သင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းများ ရှိပါသည်။ English Philology သည် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ ဒုတိယ သို့မဟုတ် တတိယဘာသာစကားကို တတ်ကျွမ်းခြင်းသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်လာသည်။ စာတမ်းတွင် ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ အရည်အချင်းသည် ထင်ရှားသည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းကြောင်းကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ကောင်းပြီ၊ ပို့စ်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုများကိုလုပ်ဆောင်သောကျောင်းသားသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏ပြည့်စုံသောအမြင်ကိုရရှိသည်။
သဒ္ဒါ၊ ဝေါဟာရနှင့် အသံထွက်တို့ကို ရင်းနှီးသည်။. ကျွမ်းကျင်သော ပါးစပ်နှင့် စာရေးဆက်သွယ်မှု။ သို့သော် အသိပညာသည် ဘာသာစကားနယ်ပယ်ကိုကျော်လွန်ပြီး ၎င်းကိုဘောင်ခတ်ထားသည့်အခြေအနေတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာစကားလေ့လာခြင်းသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာပေလွှမ်းမိုးမှုတို့နှင့်အတူ ပါ၀င်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စာသင်ချိန်အတွင်း အသက်ဆိုင်ဆုံးသော စကြာဝဠာစာပေရေးသားသူအချို့ကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။
1 အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် စာပေလေ့လာခြင်း။
2 ဘွဲ့ရပြီးပါက ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။
စာသင်ချိန်အတွင်း စာပေနယ်ပယ်သည် လွန်စွာရှိနေပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ဘွဲ့ရများသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ပြီးသောအခါ ဤနယ်ပယ်တွင် ၎င်းတို့၏ခြေလှမ်းများကို လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ သင်ကြားရေးလောကတွင် အလုပ်ရှာခြင်းသည် ပုံမှန်ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးပြု အရည်အချင်းများ တောင်းဆိုသော အခြားသော အဆိုပြုချက်များလည်း ရှိသေးသည်။. English Philology ၏ လေ့လာမှုများသည် ဖြန့်ချိရေးစျေးကွက်တွင် သင့်အား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘာသာပြန်ဆိုသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ စာရေးဆရာ၏ အလုပ်ကို အသံပေးသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သော ဘာသာပြန်သူ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် စာပေနယ်ပယ်တွင် အဓိကကျပါသည်။ သူ့အလုပ်ကနေတဆင့် စာရေးသူရဲ့ လက်ရာဟာ စာဖတ်သူအသစ်တွေဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးသည် ဘာသာစကားတစ်ခုကို နားလည်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ စကားလုံးများအသုံးပြုခြင်းသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် သို့မဟုတ် စာဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူနှင့် တံတားများဖန်တီးပေးသည်။. သို့သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောသော လူနှစ်ဦးကြား နားလည်မှုလွယ်ကူစေရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပညာရှင်တစ်ဦး၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ဘာသာစကား ဖြန်ဖြေရေးနယ်ပယ်တွင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ၎င်းတို့၏ လေ့ကျင့်မှုများကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။
English Philology ကို လေ့လာခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် များစွာသော ဆိုင်ခွဲများကို ပေးဆောင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအမြင်ရှိသော ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ တက္ကသိုလ်အဆင့်မစတင်မီ စာပေကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား၊ စကားလုံးများအတွက်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကို ထိန်းသိမ်းထားသူများဖြစ်သည်။ ဤအလေ့အထသည် စာရေးဆရာများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။
ဘွဲ့ရပြီးပါက ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။
တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားပြီးပါက ပိုမိုမြင့်မားသော အထူးပြုဘွဲ့တစ်ခုရရှိရန် ပြင်ဆင်မှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘွဲ့ရများသည် ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းကို ပြုစုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုအား စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဒဿနိကဗေဒ. စုံစမ်းမှုကာလတစ်လျှောက်တွင် ကျွမ်းကျင်သော အသိပညာများ ရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ဂရက်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာများတွင် ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ညီလာခံများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ အလားတူ၊ သင်သည် ဂုဏ်သတင်းကြီးသော မဂ္ဂဇင်းများတွင် အထူးပြုဆောင်းပါးများကို ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
ဘာသာစကားလေ့လာခြင်းသည် သီးခြားဘာသာစကားတစ်ခုသို့ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ဒဿနိကဗေဒပညာတစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုတစ်ခုစီရှိသည်။. ဤအခြေအနေတွင် အင်္ဂလိပ်စာပေသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆက်စပ်မှုကို ရရှိပါသည်။
ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုကို သင်တန်ဖိုးထားပါသလား။ ယင်းအခြေအနေတွင်၊ ၎င်းတို့၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ဤဘွဲ့ကို ပေးဆောင်သည့် မတူညီသော စင်တာများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို တိုင်ပင်ပါ။ စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီ သင်အစီအစဉ်ကိုရယူလိုသည့် အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရပြီးရင် မင်းရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဘယ်နယ်ပယ်ကို အထူးပြုချင်လဲ။ ပညာရေးနယ်ပယ်သည် ထောက်ပံ့ရေးအမြင့်မားဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အလိုအပ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအများသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုထောင့်မှ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ယူလိုကြောင်း မှတ်သားထားပါ- ယဉ်ကျေးမှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » လေ့လာမှုများ » ဂရေဒါ » English Philology ဆိုတာ ဘာလဲ။